Galvanized Steel eriri eriri
Eriri eriri igwe eji akwa akwa akwa
eriri igwe anaghị agba nchara
Ngwaahịa mma ndị ọzọ
Ụdọ na-awụli elu
Eriri eji eme mgbatị ahụ
Tamper Proof Cable Akara
Mwepụta ngwaahịa ọhụrụ
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ: 2nd ncheta nke Bangyi Foreign Trade Department
Ememe ncheta 2nd nke Ngalaba Azụmahịa Ofesi Bangyi, daalụ maka inwe gị n'ụzọ niile! N'ileghachi anya azụ na 2019, Ngalaba Azụmahịa Mba Ọzọ dị ka nwa amụrụ ọhụrụ. Taa, mgbe afọ abụọ nke ịrụsi ọrụ ike gasịrị, ndị otu anyị ji nwayọọ nwayọọ tozuo okè. N'ime afọ 2 gara aga, enwere m ekele maka iji aka na aka...
Ihe kacha mma maka ụbọchị ekele
Obi obi ekele, ekele maka nkwado na ntụkwasị obi nke ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie. Uto nke Bangyi Metal enweghị ikewapụ gị. Enwere m ekele maka ndị ahịa maka nkwado na-agbanwe agbanwe, ntụkwasị obi na ndidi, nke mere ka m bụrụ onye m bụ taa. Enwere m ekele maka onye mmekọ a ...
Ngwa ọhụrụ maka mmepụta eriri igwe igwe
E tinyela ngwa Bangyi Metal ọhụrụ maka mmepụta eriri waya, na mmepụta ka abawanyela nke ukwuu. Mmepụta usoro na ngwa iwebata: ígwè waya mmepụta ihe ga-aga site 3 isi nzọụkwụ: Drawing, Stranding, Mechie 1. Drawing: Anyị na-eji ihe n'ihu ...
Ntụpọ Kọntaktị Lay Steel Wire Rope Njirimara
A na-akpọkwa eriri waya nke eriri waya ndị dị n'akụkụ ebe a na-akpọtụrụ eriri waya gbagọrọ agbagọ. Eriri nke ụdị eriri igwe igwe (ma e wezụga eriri igwe etiti) na-eji wires ígwè nke otu nkọwa gbagọrọ agbagọ. The dina angle nke ígwè w ...
Ngwa eriri igwe anaghị agba nchara na ntinye ngwa
Ihe ndị a na-ahụkarị nke eriri igwe anaghị agba nchara bụ 304 na 316. Abụọ ndị a siri ike ịmata ọdịiche dị na ọdịdị ahụ. Isi ihe dị iche n'etiti ha bụ ọdịnaya nke ihe onwunwe, nke na-eme ka ha dị iche iche na-eguzogide corrosion na plasticity. Ntụle nke 304 na 316 stai...
Usoro ngwaahịa ọhụrụ: Steel Strand
Ị maara eriri igwe? Steel strand bụ ngwaahịa igwe ejiri ọtụtụ waya igwe gbagọrọ agbagọ. Ugbu a, ka lerning ngwaahịa a site na ụzọ ndị a: 1. Nhazi: Steel strands na-tumadi kewara galvanized ígwè strands na prestressed ígwè strands. Eriri ígwè ike...
Mara banyere mmachi nke mmepụta ụlọ ọrụ na China
Ezigbo onye ahịa, ikekwe ị achọpụtala na amụma gọọmentị China na-adịbeghị anya "abụọ njikwa ike oriri" nke nwere mmetụta ụfọdụ na ikike mmepụta nke ụfọdụ ụlọ ọrụ nrụpụta, yana ịnyefe iwu na ụfọdụ ụlọ ọrụ ga-egbu oge. m...
Hot ire Jump eriri ngwaahịa Okwu Mmalite
site admin na 21-10-14
1. Waya na-agbapụta nkọwa nke eriri: 1. Ihe eji eme eriri: PVC + Cooper plated waya eriri 2. Ihe eji eme ihe: Plastic + Foam + Bearing 3. Ulo eriri: 0.4cm * 280cm / 0.45cm * 300cm 4. Ihe njikwa: 3.5 cm cm 5. Ụdọ Agba: Black 6. Agba agba: Red, Black, Blue, Green 7. Net arọ: 150g/170g & nb...
Ihe mmeghe nke eriri igwe galvanized steel waya
Atụmatụ: 1. Ihe dị elu, ihe dị elu nke carbon ígwè, 45 # 60 # 65 # 70 #, wdg, na usoro ọgwụgwọ elu na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ma ọ bụ electro-galvanized 2. Galvanized material, mgbochi corrosion, mgbochi nchara, iguzogide torsion na ekwe, inogide, elu ike ọgwụgwụ na-eguzogide; 3. Akwụsị...
adreesị: Xujiadaokou Village Shuiwan Town, Wudi County, Binzhou City, Shandong Province
na-awụlikwa ụdọ smart, jide ụdọ ịwụ elu, ọkachamara ima elu eriri, mma ima elu eriri, wuo ụdọ zụta, ụdọ na-awụlikwa elu,